Dareenka gadhka: sababta uu u soo baxo, xalka iyo dhaqanka wanaagsan | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Daryeelka shaqsiyeed
Mararka qaarkood waxaan ogaan karnaa inuu bilaabmayo inuu kasoo baxo gadhka sida jajabyo cadcad oo la mid ah qolofta. Waa jajabyada maqaarka ee bilaabaya inay ku soo ururto dharkayaga, barkimadu waxay ahayd timaha wajiga laftiisa. Dareemku badanaa wuxuu u muuqdaa dhibaatooyin maqaarka oo kala duwan awgood, ha ahaadaan maqaarka ama nadaafad ahaan. Si kastaba ha noqotee, waa wax aan fiicnayn in la arko qof qaba qolofta gadhka maadaama ay calaamad u tahay inaadan daryeelin naftaada.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sababta qolofta ay ugu muuqato gadhka iyo maxay yihiin xalalkiisa suurtogalka ah.
1 Sababaha keena qolofta gadhka
2 Xalka dandruff ee gadhka
2.1 Jel gaar ah ama shaambo
2.2 Saliidaha gadhka
2.3 Qalajinta gadhka
2.4 Sifee maqaarka
3 Caadooyin wanaagsan si looga fogaado qolofta gadhka
Sababaha keena qolofta gadhka
Sababta muuqaalka qolofta ee gadhka waxay ka imaan kartaa dhowr arrimood. Arrimahan ayaa kali kali ah ama wada socon kara si ay dhibaatada uga sii daraan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee muuqaalka noocan ah dhibaatada maqaarka waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Cudurka fungus Pityrosporum ovale: Waa fangas si dabiici ah ugu dhacda maqaarka qof kasta, dheef-shiid kiisa dufanka jidhka, soona saarta alaabada nadaafad darrada ah Markuu dhakhso u koro, wuxuu saameeyaa cusboonaysiinta dabiiciga ah ee unugyada, taasoo keenta cuncun iyo qolofta.
Cadaadiska: dandruff sidoo kale wuxuu la xiriiraa culeyska iyo qaab nololeedka. In kasta oo ay iska cadahay, hubi inaad hesho hurdo kugu filan, cab cabitaanno badan, jimicsi, iyo cun cunto caafimaad leh - marka la soo koobo, ku noolow sida ugu macquulsan ee caafimaad leh.
Fuuq bax xun oo maqaarka ah: xakameyn la'aanta fuuq-baxa maqaarka (oo ay ugu wacan tahay maqaar dufan leh ama aad u qalalan) waxay si weyn u saameyn kartaa soosaarka qolofta.
Cimilada qabow: qabowgu badanaa wuxuu faa'iido u yahay muuqaalka qolofta maxaa yeelay waxay leedahay saameyn vasoconstrictive iyo, maadaama qanjidhada qanjirada ay shaqeeyaan waxyar, waxay helayaan fuuq yar waxayna keenaan maqaarka inuu qalalo.
Xalka dandruff ee gadhka
Ugu horreyntii, waa in la xusuustaa taas Waxay qaadataa waqti iyo dulqaad si loo xaliyo arintan, waxayna qaadan doontaa ugu yaraan 1 ilaa 2 toddobaad si loo arko horumar. Xusuusnow sidoo kale in talooyinka la tilmaamay ay ka fiirsanayaan sababaha ugu badan, in kastoo aysan sidaa u badneyn in dhibaatada ay sababi karto dermatitis ama dhibaatooyin caafimaad, taas oo macnaheedu yahay inaad la tashato takhasusle.
Jel gaar ah ama shaambo
Dhibaatooyin badan oo gadhka ka soo baxa ayaa sababa isticmaalka shaambo ama saabuun caadi ah. Wejigu waa dhul jilicsan oo u baahan ilaalin iyo nidaaminta qoyaanka. Sidaa darteed, shaambo ama jelka qubeyska ee gadhka waxay kaloo ku adkaan karaan maqaarka iyo timaha aan soo sheegnay. (Kani laf ahaantiisa xoogaa wuu ka duwan yahay maqaarkayaga iyo timaha madaxa.)
Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho saabuun gaar ah oo ay kujiraan waxyaabo xushmeeya maqaarka iyo timaha wajigaIsbeddelkani wuxuu badanaa keenaa inta badan qolofta iyo gadhka gadhka.
Isticmaalka saliidaha gadhka aad ayaa loogu talinayaa. Waxay isugu jirtaa saliid iyo nuxur ka caawiya qoyaanka, daryeelka iyo hagaajinta timaha wajiga iyo maqaarka laftiisa oo ku qarsada timaha gadaashiisa.
In kasta oo maaddooyinka ku jira qaacido kasta ay kala duwan yihiin, badankood waxaa ka mid ah jojoba, yicib, argan, geedka shaaha, lavender, canab, saliid canab, iwm Waxyaabahani waxay leeyihiin qoyaan iyo hagaajin shaqooyin, ka caawinta daryeelka gadhka, iyaga oo siiya muuqaal caafimaad leh iyo dhalaal, isla waqtigaasna ay daryeelaan maqaarka ku dhuumaaleysta timaha gadaashiisa, iyaga oo iska ilaalinaya xoqida iyo qolofta iyo cawaaqibta kale ee qalalan iyo xakamayn la'aan dheecaanka dareeraha ah.
Garka waa in si sax ah loo qalajiyo ka dib qubayska si looga fogaado qoyaan soo kordha, taas oo si xun u saameyn karta maqaarka gadhka gadaashiisa. Markuu gadhku yaryahay, Shukumaan fudud ayaa ku filan, laakiin gadhka ka dheer 1 cm, xitaa tuwaalku si fudud ayey isugu ururin karaan qoyaan.
Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho timo qalajiye si looga fogaado qoyaanka. Waxay kuxirantahay dhererka iyo mugga timaha, waxay qaadan kartaa waqti badan ama kayar. Guud ahaan, waxaan kugula talineynaa inaadan aad u dhigin timo qallajiye si aad u dhow si looga fogaado timaha wajiga ah ee dagaalka badan. Inta lagu gudajiro habka qalajinta, isticmaal awood iyo heerkulka dhexdhexaadka ah (ilaa inta la xakamayn karo).
Ka takhalusida maqaarka dhintay ayaa ah hawl muhiim ah oo maqaarkaaga u ilaalinaysa mid caafimaad qabta oo nadiif ah, ka sii daaya 1 ama 2 jeer usbuucii waa in lagu daraa jadwalkaaga quruxda ee qasabka ah, tan awgeed waxaad u isticmaali kartaa wixii xoqan ee wajiga ah ee ku habboon maqaarkaaga.
Haddii aad leedahay gadh dheer, way adkaan kartaa inaad taabato maqaarkaaga xoqid. Xaaladahaas oo kale, isticmaalka burushka garka wuxuu leeyahay saameyn la mid ah isticmaal qalabka wax lagu nadiifiyo, maadaama cadayashada gadhka ay ka caawineyso soo nooleynta maqaarka iyo ka saarida unugyada dhintay. Waxay kicineysaa qanjidhada 'sebaceous' si looga hortago maqaarka iyo gadhka qalalan.
Caadooyin wanaagsan si looga fogaado qolofta gadhka
Waxa la dhahayo markii aan cowska gadhka ka helno waxaan isticmaali karnaa qaar ka mid ah xalalka kor lagu soo jeediyay. Si kastaba ha noqotee, aad ayey ugu habboon tahay ka hortagga muuqaalka isku midka ah ka hor inta aanad isku dayin inaad daaweyso. Waa muhiim in la yeesho caadooyin nololeed oo wanaagsan si looga fogaado dhammaan noocyada xaaladahaas. Ugu dambeyntiina, jidhkeennu kuma koobna oo keliya qurxinta, laakiin sidoo kale waa inuu ahaadaa mid caafimaad qaba.
Xaaladahan oo kale, haddii aynu leenahay maqaar u nugul qabow, way ku habboon tahay in la daryeelo inta lagu jiro marxaladaha ugu qabow sannadka. Tusaale ahaan, anaga oo qallajinayna dhamaan garka aaga markaan qubaysanayno, waxaan isku dayeynaa inaan iska ilaalino isku urursiga cowska gadhka maadama qoyaanku sababi karo xoogaa gariir ah.
Caado kale oo caafimaad leh ayaa ah cunista. Haddaanan haysan cunno wanaagsan, waxaan seexanaa saacado nagu filan waxaanan leenahay culeys aad u badan waxaan sababi doonnaa dhibaatooyin maqaarka ah. Cunto wanaagsan oo ay ka buuxaan fiitamiinno iyo macdano, jidhku uma badna inuu bilaabo inuu keeno maqaarka maqaarkiisa. Waa mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah. Haddii aan isku darno caadooyinka wanaagsan iyo xalka la soo jeediyey, waxaad hubsan kartaa in qolofta laga saari doono gadhka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran doontid wax badan oo ku saabsan sida loo xalliyo dhibaatooyinka qolofta ee gadhka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Gadhka gadhka
Sida loo sawiro